Anebon သတ္တုထုတ်ကုန်များ Co. , Ltd - CNC Service ကိုဖွင့်
CNC ခုံတစ်ဦးက high-တိ, High-ထိရောက်မှု automated စက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ Multi-ဘူတာရုံဆုံလည်သို့မဟုတ်အာဏာကိုဆုံလည်တပ်ဆင်ထားသော, စက်ကိရိယာတခုအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာ၏ကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့် linear Interpol နှင့်မြို့ပတ်ရထား Interpol အတူ linear ဆလင်ဒါ, ထောင့်ဖြတ်ဆလင်ဒါ, ပြရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောချည်နှင့် groove အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောရှုပ်ထွေး workpieces process နိုင်ပါတယ်။
CNC ကွေ့မှာတော့ပစ္စည်းအရက်ဆိုင်ဟာ Chuck တှငျကငျြးပခဲ့နှင့်လှည့်, မြားနှငျ့ tool ကိုအမျိုးမျိုးသောထောင့်မှာတိုက်ကျွေးနေသည်နှင့်များစွာသော tool ကိုပုံစံမျိုးစုံအတွက်လိုချင်သောပုံသဏ္ဍာန်ကိုဖန်တီးရန်သုံးနိုငျနေကြသည်။ ဗဟိုလုပ်ငန်းဆောင်တာလှည့်ခြင်းနှင့် milling ရှိပါတယ်အခါ, သငျသညျအခွားသောပုံစံမျိုးစုံ၏ကြိတ်ခွင့်ပြုပါရန်လည်ပတ်ရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ဒီနည်းပညာပုံစံမျိုးစုံ, အရွယ်အစားနှင့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုအမျိုးမျိုးအဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ CNC တွင်ခုံများနှင့်ကွေ့စင်တာများ၏ tools များဆုံလည်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းလည်ပတ်ရပ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောတူးဖော်ခြင်း, groove နှင့်ကြိတ်မျက်နှာပြင်များကဲ့သို့သောအခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြည့်စွက်ထားတဲ့ "Real-time" tool ကို (ဥပမာရှေ့ဆောင်လုပ်ငန်း) နဲ့တစ်ဦး CNC Controller, ကိုအသုံးပြုပါ။
သငျသညျ CNC ပြောင်းလဲလိုအပ်လျှင်, ငါတို့သည်အရှိဆုံးနိုင်စွမ်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်အလိုအလျှောက်တွင်ခုံ 14 အစုံနှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတိကျစွာနှင့်အချိန်ပေါ်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၏ကျယ်ပြန့် Anebon ထူးခြားသောနမူနာအစိတ်အပိုင်းများကိုပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုသေချာ။ ထိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လုံလုံလောက်လောက်တင်းကြပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအစေခံတိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအာရုံစိုက်ပါ။
ကျနော်တို့အတွက် 10 နှစ်အချိန်ယူ CNC လှည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကအမြဲအစိတ်အပိုင်းများကိုလှည့် CNC ထုတ်လုပ်မှာသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့အသုံးဝင်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ရှုပ်ထွေးစက် module တွေသုံးပြီးနှင့်စက်လည်ပတ်ရန်ကျွမ်းကျင်သော CNC တွင်ခုံသုံးပြီးပင်ရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တသမတ်တည်းအရည်အသွေးမြင့်စက်အာမခံပါသည်။ Anebon အမြဲမြင့်မားသောတိကျဝန်းရံသောကြောင့်,
ပါဝင်သည်ဟုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ CNC ပြောင်းလဲစင်တာများ နှင့် 4-ဝင်ရိုးလှည့်စက်တွေ ။ ကျနော်တို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု options အမျိုးမျိုးကိုပေးထားပါတယ်။ ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများ, ရှည်လျားသို့မဟုတ်အတိုကောက်လှည့်တိကျစိတျအပိုငျးလှည့်ဖြစ်စေ, ကျနော်တို့ကောင်းစွာရှုပ်ထွေးရှိသမျှတို့ကိုအဆင့်ဆင့်အဘို့တပ်ဆင်ထားတဲ့နေကြသည်။
ရှေ့ပြေးပုံစံစက် / သုညစီးရီးထုတ်လုပ်မှု
အောက်ပါတင်းကျပ်ပစ္စည်းများလေ့အသုံးပြုကြသည်: လူမီနီယမ်, သံမဏိ, ကြေးနီ, နိုင်လွန်, သံမဏိ, acetal, polycarbonate, acrylic, ကြေးဝါ, PTFE, တိုက်တေနီယမ်, ကို ABS, PVC, ကြေးဝါစသည်တို့ကို
ဂျာမဏီခရီးစဉ်အဆိုပါကုမ္ပဏီက F မှစ. ဖောက်သည် ...
Anebon ဟာ့ဒ်ဝဲ Co. , Ltd ISO900 ရရှိသော ...
တိကျပြီးတော့အစွမ်းထက် CNC စက်
စိတျအပိုငျး ချ. သေဆုံး zinc, အလူမီနီသေဆုံးသွန်း, အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. , အစိတ်အပိုင်းများကို ချ. လူမီနီယံသေဆုံး , သေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းအစိတ်အပိုင်းများ , လူမီနီယံသတ္တုများပုံသွန်း,